Madaxweyne Farmaajo oo qudbad u jeedinaya maanta Labada Aqal ee Baarlamaanka -
Home News Madaxweyne Farmaajo oo qudbad u jeedinaya maanta Labada Aqal ee Baarlamaanka
Madaxweyne Farmaajo oo qudbad u jeedinaya maanta Labada Aqal ee Baarlamaanka
Madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa lagu wadaa in uu maanta qudbad u jeediyo Xildhibaanada labada Aqal ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya ee waqtigoodu dhammaaday ayaa maanta oo sabti ah kulan gaar ah ku yeelan doona Xarunta Villa Hrageysa ee Magaalada Muqdisho.
Ajendaha kulanka Xildhibaanada labada Aqal ayaa waxaa uu yahay Khudbad jeedin Madaxweynaha dowladda Federaalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, taasi oo uu uga hadli doona xaaladda siyaasadeed ee dalka iyo doorashooyinka dhacaya.
Xildhibaannada waxaa lagu wargeliyay in kulanka oo ah mid gaar ah kuna hortagayo Madaxweynaha Dowladda Federaalka ay kasoo qaybgalaan dhammaan si ay u dhageystaan fariinta Maxamed Cabdullaahi Farmaajo.
Wasiirka Warfaafinta Xukuumadda Soomaaliya Cismaan Abuukar Dubbe ayaa tallaabo aan laga maarmin ku tilmaamay hortagista Madaxwene Farmaajo ee Baarlamaanka Soomaaliya, maadaama uu sheegay in uu kala hadlayo arrin maslaxo u ah dalka.
Tan illaa xalay ayaa waxaa magaalada Muqdisho ka socday abaabulka kulanka maanta ee Xildhibaanada Baarlamaanka, kaasi oo ay wadeen Xildhibaano iyo mas’uuliyiin kale oo ka tirsan dowladda oo doonaya in kulankaas uusan baaqan.
Hase yeeshee,Guddoomiyaha Aqalka Sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayaa shaaciyay in aysan jirin kulan wadajir ah oo ay yeelanayaan Xildhibaanada oo uu soo codsaday Madaxweyne Farmaajo, hayeeshee waxaa arrintaas ka horyimid Senataro ka tirsan Aqalka Sare oo sheegay inay ka qeyb geli doonaan kulankaas.
Previous articleBiden says that “irregular” Trump should not have access to security information
Next articleAxmed Madoobe”Farmaajo afar sano wadankaan aan arkay isagu ma maamuleen ee yaa maamulayay,?